Lecturer ( Mechanical Engineering ) | Myanmar Noble College ﻿
• Well planned for developing to the assignments procedures with the external
• Have to focus on student centered teaching approach.
• Have organized and responsible followed by yearly course and curriculum planning.
• Can work to finish quarterly assessment of student work/assignments.
• To be update activities including curriculum and professional are undertaken and agreed
• To participate in internal verification and moderation procedures with Academic
• To involve in appropriate team and Committee meetings upon situation.
• To work an annual teaching work load of duties hours as detailed in the college
• To involve for student's entrance exam procedures(Explaining, writing Test,Oral test).
• Edexcelအသိအမှတ်ပြုBTEC(HND)သင်ရိုးညွန်းတမ်းများကို သင်ကြားနိုင်ရမည်။
• External Verifiers များ၏ Assignment ပုံစံများအား အစဉ်တိုးတက်အောင် အစီအစဉ်တကျရေးဆွဲနိုင်ရမည်။
• နှစ်စဉ်သင်ကြားရေးညွှန်းတမ်းများကိုစနစ်တကျရေးဆွဲ၍ တာဝန်ယူသင်ကြားပေးနိုင်ရမည်။
• Semester quarter လိုက် assignment report များအား ပြီးဆုံးအောင်စစ်ပေးရမည်။
• ရေးဆွဲထားသော သင်ကြားရေးညွန်းတမ်းများသည် Edexcel အသိအမှတ်ပြု HND သင်ရိုး ညွန်းတမ်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည်။
• ကျောင်းသားများ၏assignment များအား internal verifies(Quality Nominee)များနှင့်အတူ ပူးတွဲ စစ်ဆေးရမည်။
• အခါအားလျော်စွာ ရုံးမှကျင်းပသော အသင်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးများ၊ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ အစည်းအဝေးများအားတက်ရောက်ပေးနိုင်ရမည်။
• သင်ကြားချိန်များအားကျောင်းမှသတ်မှတ်ထားသော သင်ကြားချိန်များအတိုင်းသာ သင်ကြားရမည်။
• ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၏ကျောင်းဝင်ခွင်အတွက်ပြုလုပ်ရသော အစီအစဉ်များ (Explaining, Writing Test, Oral
• BE,ME are preferred for lecturer position.
• ME,PhD are preferred for Head position.
• Must have successful teaching experience
• Good interpersonal and communication skill.
• Good commend of spoken & written English.
• Can work with contract 1 year.
• Prefer international authorized degree holders and teaching experiences international and University.
• Lecturerရာထူးအတွက် BE,ME ဘွဲ့ရများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
• ဌာနမှူးရာထူးအတွက်ME,PhD(Candidate)များ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်၊ သင်တန်းကျောင်းများတွင် သင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံရှိသူများဦးစားပေးမည်။
We offer • Salary Negotiable
Company Industry: Lecturer ( Mechanical Engineering )
260 Days, Full time , Education / Training
268 Days, Full time , Education / Training
Lecturer ( Mechanical Engineering ) Education,Childcare & Teaching Jobs jobless jobsinyangon Myanmar Noble College Education, Childcare & Teaching jobs Education, Childcare & Teaching jobs Lecturer ( Mechanical Engineering ) Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(8550)
Bago Region 33 Days